China Ichlorinated Polyethylene yeeMveliso zePVC abavelisi kunye nabathengisi UDehua
I-polyethylene yeChlorinated (CPE) yinto ephezulu ye-molecular polymer eyenziwe kwi-HDPE ngokusebenzisa i-chlorination ngendlela yesigaba samanzi, kunye nesakhiwo esikhethekileyo se-molecular ephezulu sinika iimveliso zepropati ebonakalayo kunye neekhemikhali.
Ngokwezicelo ze-CPE, sizohlulahlula sibe ngamaqela amabini: i-CPE kunye ne-CM, kwaye ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, kwiqela ngalinye siphuhlise iintlobo ezininzi ezinee-indexes ezahlukeneyo zobugcisa.
Iimveliso zeplastiki eziqhelekileyo:
Iimveliso ze-CPE luhlobo lweendleko zokuxhamla kwiindleko, ezisetyenziswa ngokubanzi ekusetyenzisweni kweemveliso eziqinileyo nezithambileyo, ezinje ngeprofayili engqongqo ye-PVC, imibhobho, izixhobo zombhobho kunye nepaneli. I-CPE inokuphucula amandla eempembelelo zeemveliso ezigqityiweyo ze-PVC.
Njengelastomer efanelekileyo, i-CM inokusetyenziselwa ukuvelisa iimveliso zerabha ethambileyo.
I-CPE inesakhono esiphezulu sokugcwalisa umgubo we-ferrite, iimveliso zerabha zemagnethi ezenziwe kuyo ziya kuba nobushushu obuphantsi, kwaye zinokusetyenziswa ngokubanzi njengeziqwengana zokutywina ifriji, amakhadi ombane njl.
Nelangatye ABS ukumelana
I-CPE ngokwayo iqulethe i-chlorine, kwaye ine-flame retardant, kwaye isebenza kwifomula ye-ABS enganyangekiyo, idibanisa i-CPE ekukhuthazeni i-ABS, kungekuphela nje inokuthintela ekulahlekelweni kweempawu ezibonakalayo ezibangelwa ukongeza i-flame retardant engavumelekanga, kodwa kwakhona inokuphucula ukunganyangeki kwelangatye kuyo yonke inkqubo.
Inkampani yethu ibonelela ngokuzinzileyo kumabakala asibhozo aqhelekileyo e-CPE, egubungela ubunzima beemolekyuli ezahlukeneyo, umxholo wechlorine kunye ne-crystallinity, ukuze sikwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abaninzi abaziingcali.
Umxholo weChlorine % 35 ± 2 35 ± 2 35 ± 2 35 ± 2 36 ± 1 35 ± 2 35 ± 2 41 ± 1 25 ± 1 25 ± 1
Ubushushu beFusion J / g .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .05.0 .05.0 .05.0 20-40
Ukuqina konxweme A 65 65 65 65 65 65 65 65 65 ≤70
Tensile Strength MPHA -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 6.0 6.0 -8.0 -8.0
Ukudibanisa ngexesha lekhefu % ≥ 700 ≥ 700 ≥ 700 ≥ 700 ≥ 700 ≥ 700 600 Iifayile ezingama-500 ≥ 700 600
Umxholo oMdaka % .0.40 .0.40 .0.40 .0.60 .0.40 .0.40 .0.40 .0.40 .0.60 .0.40
Aluxhaswanga Intsalela (20mesh) % .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0 .02.0
Amasuntswana non-ayoni Iifayile / 100g 40 40 40 40 40 40 Iifayile ezingama-20 40 40 40
MI21.6190 ℃ g / 10min I-2.0-3.0 3.0-4.0 5.0-7.0
Kukubunzima obuphezulu beemolekyuli, ukusasazeka kobunzima bemolekyuli kunye neepropathi zoomatshini ezilungileyo, ezisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yePVC engqongqo kunye ethambileyo. Iiprofayili zeewindows ze-PVC, ucingo, imibhobho, ibhodi kunye nezindlu ezisongiweyo ipleyiti njl.
Ngobunzima obuphezulu beemolekyuli kunye nokusasazwa kobunzima beemolekyuli ezifanelekileyo, kunye nokufana neTyrin 7000. Iiprofayili zeewindows ze-PVC, ucingo, imibhobho, ibhodi kunye nezindlu ezisongiweyo ipleyiti njl.
Ngobunzima beemolekyuli ezifanelekileyo kunye nobubanzi obuninzi bokuhanjiswa kobunzima, isantya esiphakathi seplastikhi. Ukuhanjiswa okukhawulezayo kweefayile zePVC zefestile.
Ngobunzima beemolekyuli ezifanelekileyo kunye nobubanzi obuninzi bokuhanjiswa kobunzima, ukufakelwa kweplastikhi ngokukhawuleza. Ukuhanjiswa okukhawulezayo kweefayile zePVC zefestile.
Ubunzima beemolekyuli eziqhelekileyo kunye nokuhanjiswa kobunzima beemolekyuli obuncinci, kunye neplastizing iyakhawuleza, kwaye iyafana neTyrin3615P. Iiprofayili zefestile ye-PVC, imibhobho, izixhobo zokwenza inaliti kunye nezinto ezizodwa njl.
Ubunzima beemolekyuli ezisezantsi kunye nobunzima obuncinci bokuhanjiswa kobunzima, kwaye iyafana neTyrin6000. Ifilimu, iprofayili, imitya yokutywina kunye yedwa njl.
Ubunzima obuphantsi beemolekyuli kunye ne-crystallinity, inokuhambelana okuhle ne-ABS, kwaye ikukukuhamba okungcono, okusetyenziselwa iimveliso zemodeli, kunokuphucula ukuxhathisa kwelangatye kunye nefuthe lokuqina.
Kwidangatye elinganyangekiyo le-ABS.
Ubunzima beemolekyuli ezisezantsi kunye ne-crystallinity ephantsi Ifilimu yePVC kunye nephepha.
Umxholo we-chlorine ophantsi kunye ne-crystallinity, kwaye iyafana neTyrin2500P. Iiprofayili zeewindows ze-PVC, ucingo, imibhobho, ibhodi njl
Umxholo we-chlorine ophantsi kunye ne-crystallinity ephezulu, unokuhambelana okuhle neplastiki yenjongo ngokubanzi, umzekelo i-PE. Ukuphucula ukusebenza kweplastiki kunye nokuphucula ukuxhathisa ukuguga, njengobushushu obuphantsi kunye nokuxhathisa kwe-ozone
Okulandelayo: I-Polyethylene yeChlorinated yeeMveliso zeMagnetic